Kobaca Adeegga Macaamiisha Bulshada | Martech Zone
Markii aan la tashaneyno shirkadaha waaweyn ee doonaya inay ku mashquulaan warbaahinta bulshada, taxanaha ugu horreeya ee su'aalaha aan weydiinno waxay ku saabsan yihiin kaabayaasha adeegga macaamiishooda. In kasta oo kooxaha suuqgeynta ay eegaan warbaahinta bulshada si ay u ballaariyaan farriintooda khadka tooska ah, macaamiisha shirkadahaas waxay filayaan in ay tahay mid cusub oo ay u baahan yihiin jawaab.
From Bluewolf: Shirkadaha horay u fakara ayaa maalgashanaya qalab gacan siinaya kaliya wakiiladooda adeega macaamiisha, laakiin dhamaan shaqaalahooda, oo leh tartan tartan ah. Soo gal ilaha faahfaahinaya sida loogu guurayo miiskaaga adeegga daruurta, oo aad ugula jaanqaadayso dhaqanka macaamiisha diirada saaraya, ayaa kaa caawin kara inaad tartanto oo aad guuleysato.
Waa kuwan faahfaahin weyn oo ka socda Bluewolf oo bixisa aragti ku saabsan koritaanka warshadaha adeegga macaamiisha bulshada:
Oo waa kuwan muuqaalka guud sida Bluewolf ay u caawin karto ganacsigaaga:
Hubso inaad soo dejiso Xirmada Guusha Adeegga Bulshada ee Bluewolf!
Tags: buluugAdeegga macaamiishainfographicadeegga macaamiisha bulshada